Izinsizakalo nezinqubomgomo nama-FAQ - shaoxing Yun Ai textile Co., Ltd.
Ulapha: ekhaya - Khonza
Imininingwane Yesevisi Imibuzo evame ukubuzwa
Ukudlulisela phambili ngeSifunda
Ngenkathi sithemba ukuthi konke ukuthenga kukulingana okuhle, siyazi kwesinye isikhathi ukuthi akunjalo! Awukwazi “ukuwenza usebenze”? Nazi izinketho zakho:
Izindwangu, izicucu, ama-oda akhethekile, nanoma yini esikwe ngosayizi AYIBULEKI / ayishintshaniswa. Izinkinobho, imibono, noma yini edayiswa iyonke njengemikhawulo yokuthunga engavulwa namafomu okugqoka ingashintshaniswa noma ibuyiselwe isikweletu esigcwele esitolo (imali encane yokuthumela). Izimangalo / ukushintshaniswa KUFANELE kwenziwe zingakapheli izinsuku ezingama-30 zosuku lokuqala lokuthumela.